राजा आउने हल्ला माथी सरकारका प्रवक्ताको प्रश्न : कहाँको राजा, लावण्य देशको ? — SuchanaKendra.Com
राजा आउने हल्ला माथी सरकारका प्रवक्ताको प्रश्न : कहाँको राजा, लावण्य देशको ?
काठमाडौँ,। सरकारका प्रवक्ता एवम् सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले राजा आउने भनेर हाउगुजी नदेखाउन चेतावनी दिएका छन् ।पछिल्लो समय डाकिएको सर्वदलीय बैठक र त्यहाँ चर्चा उठेको गणतन्त्र जोगाउने विषयको सन्दर्भमा बिहीबार धारणा राख्दै मन्त्री बाँस्कोटाले राजतन्त्र इतिहास भइसकेको बताए।
‘कहाँबाट, को राजा, कहाँको राजा, लावण्य देशको ? नेपालमा त राजा छैन त’, उनले भने, पछि इतिहास पढ्दा अहिलेको पुस्ताले पनि र भोलिको पुस्ताले पनि इतिहास पढ्नेछ। बाइसे चौबिसेदेखि कहाँकहाँ आइपुगेर अन्त्य भएको, त्यो पढ्नेछ ।’
उनले मरिसकेको राजतन्त्र उठ्नै नसक्ने पनि बताए । ‘मरेको राजतन्त्रले फणा उठाउन सक्दैन’, उनले भने, ‘राजाका नाममा राजनीति गर्नेहरु डाइनोसर हुन्छन् ।’ चिहानमा आराधना गरेर राजतन्त्र नफर्किने उनको भनाई छ ।